Xalka CRM la awoodi karo | CRM ganacsigaaga | La Awoodi karo oo Ugu Fiican Ganacsatada Yar Yar iyo Kuwa Waaweynba.
CRM SOLUTIONS macaamiishayada
La awoodi karo iyo Xalka CRM Ugu Wanaagsan
Dhammaan wicitaannada hal meel ayaa ku yaal
24 saac kormeer
Jawaab otomaatig ah iyo kormeer
Xalka Shirkadaha: 86, 742
Xalalkayagu waxaa ka mid ah
Iyada oo ku saleysan qaab dhismeedka shirkaddaada iyo shuruudahaaga waxaan ku siinnaa Xidhmada Xalinta Khilaafaadka CRM isla mar ahaantaana waxaan sidoo kale bixinnaa Xalka CRM loo habeeyay, sidoo kale.
Maareynta Mashruuca & Hawsha
Kooxahaadu waxay awood u yeelan doonaan inay abuuraan goob shaqo oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka xarun ahaan la heli karo. Waxay u abuuri karaan shaqo naftooda ama kuwa kale. Maareeyayaashu waxay marin u heli doonaan warbixinnada dhammaan heerarka.
Kooxdaada iyo macaamiishaadu waxay awoodi doonaan inay ku xiriiraan emaylka laakiin sidoo kale waxay awoodi doonaan inay ku wada xiriiraan shabakadaha warbaahinta bulshada ee ugu fiican. Dhamaan hal meel.
Wadahadalka Shirkadda, Wadahadallada & Wicitaanada Fiidiyowga
Waxaad awood u yeelan doontaa inaad abuurto kanaalno, kooxo iyo sheeko-wadaagyo u saamaxaya is-dhexgalka ka dhex dhaca ururka iyo sidoo kale macaamiishaada.
Waxaad haysan kartaa dukumentiyo hal meel ah si ay udub dhexaad u ahaadaan kooxdaada sidoo kale waxaa lala wadaagi karaa guji batoonka macaamiishaada.
Kaydinta faylka, Tifatirka & Maareynta
Xalka daruuriga ah waxaad fursad u heli doontaa inaad ku kaydiso oo aad ku kaydiso faylashaaga jawi aamin ah oo aamin ah. Xalka waxaa lagu bixin karaa gudaha kaabayaashaada iyo sidoo kale iyada oo loo marayo xalka martigalinta daruuriga ah ee dibedda.
Kalandarka & Qorshaynta
Dhamaan hal nidaam. Waxay noqon kartaa mid kaligeed taagan ama loo adeegsado Google Calendar ama Microsoft Muuqaalka.
CRM waxaa lagu dhex dari karaa Google Mail, Microsoft Exchange ama wax kasta oo loo yaqaan 'SMTP' ama 'POP server server', kaas oo loo beddelo Hogaanka CRM.
Xalka Xarunta Xiriirka
Xirmooyin CRM oo ballaaran oo loogu talagalay Xarumaha Xiriirada kuwaas oo ku habboon maamulka maaraynta xiriirka iyo taageerada waaxda iibka. Abuur warbixinno, boodhadhka iibka, qaan-sheegashada, jiilka tigidhada iyo waxyaabo kaloo badan.
Adeegyada VOIP iyo telefoonka PBX
Wicitaanada imanaya iyo kuwa soo galaya ee ka socda desktop-ka ama SIP-telefoonka ama Mobilkaaga. Waad u sameyn kartaa wicitaano banaanka taleefanka gacanta ama kan dhulka adduunka oo dhan qiimo aad u jaban.
Maaraynta Khayraadka Bani'aadamka
Aalado kaladuwan oo lagu taageerayo waaxda Kheyraadka aadanaha, oo ay badankood ka shaqeeyaan sida; Imaanshaha, codsashada iyo bixinta caleemo saarka, sheegashada kharashyada, xisaabinta mushaharka si magacooda loo dhigo.
Xalka CRM waxaa si toos ah loogu dhex dari karaa websaydhkaaga taageerada macaamiisha iyo jiilka hogaaminta.
Xigashooyinka iyo Invoice Generation
Adiga iyo kooxdaadu waxaad si toos ah u abuuri kartaan Qormooyinka iyo qaansheegyada tooska ah ee loo maro CRM-kaaga, taasoo nolosha ka dhigaysa mid aad u sahlan marka loo eego nidaamyada dhaqanka.
Waxaad xor u tahay inaad macaamiishaada siiso nidaamka taageerada macaamiisha adag ee xarunta si aad u diiwaangeliso oo aad u diiwaangeliso macaamiisha u adeegaysa codsiyada iyo xallinta dhibaato la'aan.
Fursad inaad ku iibiso / tixraacdo oo aad sameysato kooxdaada oo aad kasbato.
Samee kooxdaada meel kasta oo adduunka ah
Hel Taageero Balaadhin Ganacsi oo ah ilaa $ 2000
Soo hel Shirkaddaada shelf maanta! Nala soo xiriir